Home Wararka Heshiiska Carabta oo rajo beel ku riday ragii lacagta ku badalan jiray...
Heshiiska Carabta oo rajo beel ku riday ragii lacagta ku badalan jiray qadiyada Soomaaliya
Heshiiska wadamada Khaliijka ee maanta la filayo in lagu kala saxiixdo magaaladda Al Ula ee dalka Sacuudi Careebiya ayaa durbadiiba waxa uu rajo beel ku riday qaar kamida musharaxiinta u tartameysa Jagada Madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo ay noloshoodu ku tiirsanayd lacago ay ugu adeegaan danaha wadamadaas.
Shirka ay ku kulmayaan wadamada Khaliijka ayaa la filayaa in lagu soo afajaro khilaafkii u dhaxeeyay wadamada walaalaha ah oo in mudo ah culays ku ahaa shacabka ku nool dalalka Khaliijka.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamida raga sida joogtada ah lacagta loogu siin jiray in ay difaacaan qadiyadaha qaar kamida wadamada Khaliijka ee colaada u dhaxeeysay ayaa durbadiiba waxa uu muujiyay rajo xumo ah in uusan wax lacag ah ka heli doonin wadamadaas madaama heshiis laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay.
Isaga oo ay ka muuqato wal-wal kala soo darsay in uusan heli doonin dhaqaalihii uu ku tiirsanaa ee kaga imaan jiray wadamada Khaliijka, ayuu maanta markii u horeeysay bilaabay in uu shacabka Soomaaliyeed waydiisto lacag sadaqo ah oo uu doorasho ku galo.
Su’aasha dad badani isweydiinayaan ayaa ah: Sidee lagu aamini karaa shaqsi markii hore lacag yar ku badashay karaamadii iyo sharafkii umadda Soomaaliyeed? Maxaa laga filan karaa hadii ay gacanta u gasho hogaanka dalka Soomaaliya?. Ma lagu aamini karaa qadiyada umadda Soomaaliyeed?